Raysal wasaare khayre Waa Geesi Somaali usoo kacay – Radio Daljir
Maarso 7, 2018 1:36 g 0
Dalkeena waxaa la haray dagaalo sokeeye,oo inagu daba dheeraaday.Tanoo sababtay in aynu noqono dawlad la aan mudo dheer.intaynu isku maqnayn inagoo ah soomaali ah hal umad oo ah isku diin isku midab isku af isku dhaqan isku dhiig isku dhalasha oo aan lakala qaadi karin.ayaa waxaa inaga faa iidaystay cadawgeenii soo jireenka ahaa,iyo mid cusub intaba oo u arkay fursad laynagu dulaysan karo oo laynagu gumaysan karo.Maxaayeelay inagaa isu muuqanay oo isu tanaasuli waynay taasoo keentay in aan ahaano dawlad la aan. meel aan dawlad lahayna cadawkastaa ka faa iidaysta.dawlad xun ayaa dhaanta dawlad la aan.
Dadka qaar ayaa dhaliilay dawladii kacaanka oo u arkaayay kaligii talis,sidaa haba ahaatee waxaan ahayn dal leh xuduud aan lagu soo xad gudbi karayn,haday ahaan lahayd dhanka bada iyo bariga iyo cirkaba.bal in dawlad nimo qaali tahay xataa dawladii kaligii taliska ahayd ayaa inoo ilaalinaysay dalkeena oo amaan keenu waa sugnaa iyo madaxbanaanida dadka iyo dalka soomaaliyeed.madax kasta oo aan dhaliilno waxaa ku xigi uun maalin in uu yimaado mid wanaagsan oo ah sidaynu rabnay. Laakiin waxaan marnaba laysku khilaafi karayn in aynu leenahay dawlad.dhibka inagu dhacay waa dawlad la aanta.
Dawlada Ethiopia waa cadaw daris inala ah,waxay sheegtaan in ay leeyihiin dhulka soomaali galbeed oo ay xoog ku haystaan,waxay sidoo kale sheegtaan xeebaha iyo dhulka soomaaliyeed ee xorta ah in ay leeyihiin maalin maalmaha kamid ahna soo ceshanayaan. waxay in kirsan yihiin in ay jirto dawlad soomaaliyeed.waxay u sheegen caalamka oo dhan in ay jiraan qabiilooyin soomaaliyeed oo hoos yimaad boqortooyada ethiopia balse aysan jirin qaran soomaaliyeed. Gumaystaha reer yurub waxay kuwareejiyeen dalkeena ethiopia.soomaaligalbeed1948dii ayaa loo sixiixay ingiriis baa siiyay,1958 dii waxa uu hadana siiyay dhulkii kaydka resave erea.
DP WORL oo ah emaraadka ayaa la heshiisay dawlada ethiopia in ay dalka soomaaliyeed xeebtiisa BARBARA ka kirayso oo halkaa soo dagaan.DP WORL si aadan uuga didin ayaa laga soo dhigay carab khamiis dheere ah laakiin dhabtu waa ingiriiskii shalay inoo hoosaasiyay ethiopia ee dhulkeena siiyay unbaa maantana siinaya dalkeena.
Sheekadan cinwaankeedu waa Ganaacsi iyo dakado laakiin dhabtu waa qabsasho dhuleed oo loo salaxay ethiopia ninkan khamiiska wata ee laynoo soo adeegsadayna bari buu iska tagayaa,heshiiskana hade adigaba kulama galin ee ethiopia ayuu lagalay. dalkeenii ayaa laba dawladood oo ajanabi ahi kala gadanayaan inagoo aan waxba laynaga waydiin oo ah kuwii dhulka iska lahaa!!
DP WORL waxay furaysaa saldhig aad uwayn barbara agteeda waxay ku sheegeen in ciidan soo dagayo ilaaliya danaha dakada ay maal gashanayaan,ciidankaas oo ka imanaya ethiopia oo hore ay ugu heshiiyeen.waa arin ah gumaysi cad oo loo bareeray.Madaxda somaliland waxaa looga dhigay arimo ganaacsi iyo in dadkooda shaqo loo abuurayo oo dakad weyn loo dhisayo oo ay helayaan hormar,intaa waxaa u dheer jeeb galis iyaga la faca oo lasiiyay oo ay u arkeen lacag iska socota uun.
Shacabka wadaniga ah ee somaliland waaba ku baryay,wayna garteen dhagarta meesha taala iyo isticmaarsiga ay galeen.horana baarlamaanka soomaliland waa laga qariyay waxa heshiiskani yahay,madaxwaynaha cusub ee Muuse biixi isna maalin dhawyd waakii looga yeeray ADIS-ABABA,waxaana loo sheegay in uusan ka hor iman qorshahaan wuuna aqbalay. uuma uusan sheegin shacabka waa ka qariyay.
Dawlada soomaaliyeed ee fadaraalka ah xukuumadu oo uu hogaaminaayo Raysalwasaraha soomaaliya khayre ayaa ku dhawaaqay in aysan aqbal ahayn dawladii iyo shirkadii iyo shaqsigii dalkan xorta ah dan kaleh ah maal gashi ee aan soomarin dariiqa ah sharciga u yaal dalka,hadaba dawlada soomaaliyeed wax loogu yimid oo laga tala galiyay heshiiskan ka dhacay dubai majirto. sidaa daraadeed dawlada soomaaliyeed ma aqoon sana waxa ay sheegteen labada dawladood ee ah ETHIOPIA IYO EMARAAD. Mid waa jirtaa labadan dawladood xaqbay u leeyihiin in ay dubai iyo adis-ababa hawlo ganaacsi ka furtaan laakiin BARBARA maha dubai iyo adis-ababa mid lagu khaldi karayo. waxay lamid tahay inagoo ni raahna Turkiga waxaan kula sixiixanaynaa in aad saldhig milatariy nooga furto magalda GONDER!!
Dawlada soomaaliyeed waxaa hogaaminaya rag geesiyaal ah oo aan u jixin jixayn cadawga,oo fulinaya waxay ku dhaarteen oo diifaacaya dalka iyo dadka iyo diinta.Raysal wasaare khayre waa geesi wadani ah,waa nin iska diiday in lacag lagu gato waanin ku kalsoon diintiisa dadkiisa iyo dalkiisa.waa nin fahan san dhagarta gumaysiga.si cad ayuu gaashaanka uugu dhuftay damicii cadawga is biirsaday ee dalkeena kusoo duulay.hadaba dawlada iyo shacabka soomaaliyeed maanta hubka haday shalay iyagu isu wateen maanta waxay uwataan oo u qaadeen in ay difaacaan sharafkooda iyo dalkooda iyo diintooda.Carab xunoo khiyaano wata oo ingiriis u shaqaynaya iyo yuhuud iyo ethiopian iswataa ma qabsan karaan dhulkayaga waana iska dhicinaynaa.
Waana waajib diiniyan ah in aan difaacnaa dalkeena oo iska celinaa cadawga ina soo damcay oo ku tuntay karaamadeenii iyo madaxbanaanideenii.in dalkeenii inagoo ah soomaali oo nool labadawladood ku shirkoobaan waa ceeb tii uwaynayd waana gaf cad iyo ihaano aan karabno magdhaw dagdag ah iyo raaligalin ay kasheegaan golaha aduunka dhexdiisa.ethiopia waa ka adagnahay waa in aan cashar u dhignaa oo dagaalka galaa waana waajib xaq ah in aan dagaal qaadnaa.
Dadka lasocda cadawga waa in labar tilmaansadaa iyagaa ka xun cadawga ninkastoo inaga raacay shisheeye oo caasiyay dadkiisii iyo dalkiisii iyo diintiisaba boos uugama banaana dalkeena hooyo.arinkuna waa difaaca dalka lagu soo duulay.dawlada iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duuban waa kumahad sanyihiin kacdoonka difaaca dalkeena hooyo ee cadawga horarka ahi soo damaaciyay.Markaynu soomaaliyeey kayaabayno illaahi ina abuurtay maalinta qiyaamana ina soobixindoona oo qof qof inoo xisaabinaya,maanta dalkeena waa nasiib badanahay siaad iyo aad ah waana in aan illaahay ugu shukrinaa waayo waxaynu haysanaa Madaxwayne iyo Raysal wasaare iska diiday in carab ka qaataan malaayiin doolars ah oo ay damceen in ay ku laaluushaan oo danta dalkeena laga gato.waa niman wadaniyiin ah kana run sheegay oo ogsoon waxay u dhaarteen.xagooda cadaw inoogama soo dhacayo ee hadaynu nahay shacabkii dalkaan lahaa aan difaacano oo ilaashano dalkeena oo ayaan dhankeena looga soo dhicin dalkeena oo ah hoygii mustaqbalka ubadkeena soomaaliyeed,oo xaq inoogu leh in aan u ilaalino dalkoodan hodanka ah.
Maanta Geesigeena qaaliga ah raysal wasaare khayre boqol malyan ayuu kadiiday guntii carbeed,horana madaxwayne farmaajo ayaa ka diiday malaayiin dollars ah guntii carbeed,carabtu sidooda oo kale ayay ina moodeen cabdu diinaar gaalo yeelatay oo caamil ah.Soomaaliya sharaf bay waligeed ahayd hadana leedahay lahaana doontaa. dhul barqaaqo ah iyo xoolo ayaan leenahay illaahay unbaan u baahanay oo kaliya.xasuus markii madaxwaynaheenu ka diiday carabtaa gunta ah laaluushkii,wakii inoogu khudbeeyay “GAAJO GOBONIMO LEH AYAA DHAANTA GUNIMO DHARAGLEH” madaxdeenu karaamadeenii ayay soo celiyeen.hada waa uun dalkeena aan difaacano.
Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray Xarumaha Muhiimka ah ee Dhuusamareeb